Ndụmọdụ 5 iji meziwanye Ahụmịhe Email Gị Ezumike na 2017 | Martech Zone
5 Atụmatụ iji meziwanye ezumike ezumike ezumike gị na 2017
Ndị mmekọ anyị na 250ok, email arụmọrụ n'elu ikpo okwu, tinyere Hubspot na MailCharts enyela ụfọdụ data dị mkpa na ọdịiche dị iche iche na afọ abụọ gara aga nke data maka Black Friday na Cyber ​​Monday.
Iji nye gị ndụmọdụ kachasị mma dị, Joe Montgomery nke 250ok jikọtara ya na Courtney Sembler, Prọfesọ Inbox na HubSpot Academy, na Carl Sednaoui, Director nke Marketing na Co-guzobere na MailCharts. Ozi email ahụ gụnyere sitere na nyocha MailCharts nke ndị na-ere ahịa ịntanetị 1000 kachasị elu (IR1000) nke gụnyere “Black Friday” ma ọ bụ “Cyber ​​Monday” na isiokwu ahụ.
Ha kwubiri na ị nwere ike imeziwanye ozi ịntanetị gị n'ozuzu, mmeghe email, na ọnụego ịzụta email site n'ịhụ na ụzọ ise ndị a na-etinye na oge ezumike a:
Oge Email - Debe ahụmịhe ndị ahịa na mbụ ma tụlee ịjụ ma ha chọrọ ịnata olu email dị elu n’oge ezumike. Ime nke a nwere ike belata ndepụta ndepụta ezumike ma mee ka iguzosi ike n'ihe dị ike.
Gbue Ubochi gi - Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya site na RetailMeNot kọrọ na 45% nke ndị na-azụ ahịa na-eme atụmatụ ịmalite ịzụ ezumike tupu November. Tụlee ịgbatị ụgbọ elu mkpọsa na ụzọ abụọ; bido na mbụ, gbaa ọsọ karịa.
Kere Mma - Ihe ngosi siri ike nke nwere CTA doro anya bụ isi maka ozi ịntanetị na-agbanwe. Na mgbakwunye, gbaa mbọ hụ na ozi ịntanetị gị na-arụ ọrụ n'ofe nyiwe na ngwaọrụ ndị ahịa gị ga-eji tupu izipu ozi.
Nyocha - Dika akuko nke Online Trust Alliance weputara na June 2017, ọkara nke 100 ndị na-ere ahịa US kachasị elu, na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke 500 kacha elu enweghị ezigbo nyocha email na nchekwa. Ekwela ka phishing ọgụ na-emebi ezumike.
Kpọọ ka ị rụọ ọrụ - Gwa ndi ahia ka ha tinye ihe ichoro izuta n’aka gi - nke a ga - ebelata nsogbu n’oge ojukwu Black Friday / Cyber ​​Monday. Gbaa ndi ahia ume na ihe ha noo n’ime ugbo ala ha ka ha nwee ebe ha gha aputa ka ha were kwuo ego ezumike gi.
Nke a bụ ozi infographic zuru oke, Black Friday na Cyber ​​Monday Inbox Ahụmahụ.
Tags: 250okNyochanwa ogekpọọ ka emecyber mondayemailNyocha emailozi nnapụta emailemail imeweigbe ozindị na-ere ịntanetịchaatị